IQela eliSebenzisayo laseAfrika lokurhweba ngokuThengisa ngeNdlovu e-Asiya
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeManyano » IQela eliSebenzisayo laseAfrika lokurhweba ngokuThengisa ngeNdlovu e-Asiya
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • IKenya Breaking News • Xanduva • komzila Ngoku • Iindaba zaseZambia eziQhekezayo
Ngomsebenzi obalulekileyo, iqela elinqamlezayo laseAfrika libambe abadlali abaphambili abali-7 abathe bathengisa ngokungekho mthethweni itoni enye yamabamba endlovu ukusuka eUganda ukuya eSingapore edlula eKenya kwimeko enye kuphela, nabayinxalenye yeqela elinoxanduva lokunciphisa iindlovu zaseAfrika. kurhwebo lwendlovu, kunye nezinye iintlobo ezisemngciphekweni ezinamalungu omzimba asashushumbiswa kakhulu kwiimarike ezimnyama zaseAsia.
Umkhosi waseLusaka Agreement Task Force (LATF) ubhengeze namhlanje ukuba bagqiba nje ukuququzelela ukusebenza okunzima kweeveki ezintandathu kukhokelela ekubanjweni kaninzi, kubandakanya negosa eliphezulu laseKenya lokuThumela, iiarhente ezininzi zokuhambisa ngenqanawa, kunye nabarhwebi abakumgangatho ophezulu ngendima yabo ekushushumbiseni okungekho mthethweni Umthwalo oya eSingapore ngeyoKwindla ngo-2014. Abatyholwa baphantsi kophando ngolunye ulwaphulo mthetho lwezilwanyana zasendle.
Olu tyando lwatyhila ubungqina obunxibelelana nezinye iindawo zaseAfrika naseAsia.
Abaphandi bakholelwa ukuba umbhobho ofihlakeleyo osetyenziswe kwityala lika-Matshi 2014, kwaye abantu abawuqhubayo, bahlala besebenza kude kube ngoku, njengoko amawaka amabamba kunye nezinye izinto zasendle, bethunyelwe ngokungekho mthethweni ngeendlela ezifanayo. Ngexesha lomsebenzi, egxile ekurhwebeni ngamabamba eendlovu, omnye umrhwebi wasezilwanyaneni osetempileni owayefuna uludwe oluthi "Isaziso Esibomvu" wafunyanwa kulomxube wabuya watshutshiswa eTanzania ngendima yakhe ekurhwebesheni iintsalela zamawaka ezilwanyana ezisengozini EMazantsi mpuma Asiya. Umtyholwa, uGakou Fodie, wakhutshwa ngempumelelo esuka kumda waseUganda / Kenya waya eTanzania ekuqaleni kwale veki ukuze atshutshiswe kwindima yakhe kuthunyelo olungekho mthethweni lweetoni ezi-6 zesikali sepangolin esiya e-Asiya. UFodie unxulunyaniswe nokunye ukuthunyelwa kwezilwanyana zasendle eMpuma naseNtshona Afrika eAsia.
Ukulungelelaniswa yi-LATF, ukusebenza kutshanje sisiphumo seenyanga ezili-18 zophando kumazwe ayi-8 ziiarhente ezininzi. NgoDisemba ngo-2015, i-LATF yaya eBangkok yatshintsha ulwazi kunye ne-ASEAN Wildlife Enforcing Network (ASEAN-WEN) kunye neearhente zayo ezingamalungu malunga nokubanjwa kweempondo zendlovu e-Southeast Asia. Olo tshintshiselwano lwasetyenziswa okokuqala ekusebenzeni okulungelelanisiweyo kwe-LATF eNtshona Afrika ngasekupheleni kuka-2016 okukhokelele ekubanjweni kwabasi-8 kwamaGosa aRhafayo.
I-LATF emva koko yahlalutya idatha evela kwintsebenzo egxile eNtshona Afrika ka-2016 kunye nokubanjwa ngo-Matshi 2014 eSingapore. Besebenzisa iyunithi ye-digital forensics ebizwa ngokuba yiCellebrite kunye nenkqubo yohlalutyo lwekhompyuter ebizwa ngokuba yi-i-2, abaphandi bakwazi ukudibanisa amachaphaza phakathi kokubanjwa kunye nabathengisi. Ukuthatha inxaxheba kolu hlalutyo, i-LATF ikhokele iqela lamaPolisa aseKenya, iZilwanyana zasendle, iGunyabantu leZibuko kunye namagosa e-Customs ukuba atyhile imibhobho yokurhweba ngabantu basendle e-Uganda, Kenya naseTanzania. Iqela lafumanisa laza labamba igosa laseKenya leGunya leNgeniso, uJames Njagi owayesebenza kwizibuko laseMombasa, kunye noJames Oliech noSilas Ndolo Kimeu, bobabini abasebenza kwezomthetho eMombasa. La madoda asebenzisana nesizwe saseKenya, uJustus Wesonga, owayeququzelela ekongamela ukuthunyelwa ngokungekho mthethweni kwamabamba avela eUganda kunqumla umda weMalaba oya eKenya. Iibhokisi ezilishumi elinesihlanu zamabamba endlovu eziphawulwe njengamaqunube ekofu zithuthwe ngendlela kwilori zisiya kwizibuko laseMombasa apho zilayishwe kwinqanawa eya eSingapore emva kokuba icocwe zizibuko kunye namagosa amaCustoms. Njengokuba bekuqhubeka ukufunwa kwe-LATF, uJustus Wesonga noJumba Gaylord nabo badityaniswa. I-Gaylord ibonakala ngathi idlale indima enkulu ekuhleleni i-ndlovu ukuze idlule kwi-Customs kunye nolawulo lwezibuko.
Ngo-2015 kuphela, iitoni ezingama-32 zophondo lwendlovu zabanjwa kuMzantsi-mpuma weAsia zivela kumazibuko aseMpuma nawaseNtshona Afrika. "Oku kubanjwa kutyhila ukuba ukuthutyeleziswa kwenziwe njani," utshilo uKraisak Choonhavan, uSihlalo waseFreeland, umbutho wokurhweba ngabantu ngokungekho semthethweni owabonelela ngoqeqesho kwimisebenzi elungelelanisiweyo ye-LATF. “Siyathemba ukuba uphando luzakuqhubeka ngoku e-Asiya ukufumana abathengi abakhulu abaxhasa ukubulawa kweendlovu. I-Afrika ngoku iphambili e-Asiya ngokuya ngaphaya kokuhlutha nokwenza ukubanjwa okunentsingiselo kwabaphuli mthetho bezilwanyana zasendle, ”wongeze watsho. "Kodwa kuyakhuthaza ukuthotyelwa komthetho wase-Afrika kuxhamle kakhulu kwintsebenziswano yokuthotyelwa komthetho eMzantsi-mpuma we-Asia kweli tyala."
U-Sean O'Regan, Umphathi Wezomthetho Wase-Freeland e-Afrika, utshilo. "Ukufunyanwa kwale mibhobho iphantsi komhlaba ebisetyenziselwa ukuhambisa uninzi lwamabamba aphuma eAfrika iye kwiimarike zabantsundu zaseAsia kubonisa ukuba lisekhona ithemba ngendlovu esemngciphekweni."
U-Ebayi Bonaventure, uMlawuli we-LATF, wafunga ukuba uza kuqhubeka nophando. “Sizakuqhubekeka sifumane wonke umntu obandakanyekayo kolu xhaso lwezinto zolwaphulo-mthetho, ukusuka kumabala okuzingela ngokungekho mthethweni kuye kubathengi. Asizukuma de kuphele ukubulala nokuthengisa ngokungekho mthethweni, ”utshilo.
I-LATF ilungelelanise iqela lophando lwe-arhente ye-Afrika ukuba ihambele eMzantsi-mpuma Asia kabini kwiinyanga ezili-18 ezidlulileyo ukuya kudibana namagosa anyanzelisa umthetho wase-Asiya kwaye aqokelele ubungqina bokuxhasa amatyala okurhweba ngamabamba endlovu. Amalungu eqela lophando lwee-arhente ezininzi ebesenziwa kuqeqesho lophando olukhethekileyo nguFreeland. UFreeland, ngokubambisana ne-LATF, i-Interpol, kunye ne-Ofisi yeZizwe eziManyeneyo kwiZiyobisi noLwaphulo-mthetho, bezisa abanyanzelisi bomthetho base-Afrika nabase-Asia ukuba babelane ngolwazi malunga namatyala okurhweba ngezilwanyana zasendle njengale.
Ubalo maxesha: OJT Kenya / Uganda ukubanjwa
Ngomhla ka-Matshi 2014: ISingapore yathimba itoni enye yamabamba endlovu evela eMombasa, eKenya. Inombolo yesikhongozeli i-CMAU 1, evela eKampala, eUganda yathunyelwa ngeMalaba isiya eMombasa yaza yabanjwa eSingapore ngoMatshi 1121948, 25 enetoni yophondo lwendlovu efihlwe kwiibhokisi zomthi eziyi-2014.
Nge-Epreli ka-2014: Amasiko eThai naseVietnam athatha izinto ezahlukileyo zamathole eendlovu avela eCongo Brazzaville naseCongo DRC.
UDisemba 2015: IFreeland izisa i-LATF kunye namalungu eqela lophando lwee-arhente ezininzi eBangkok ukuya kudibana ne-ASEAN-WEN, amapolisa aseThai, amaSiko, iVietnam Customs, iSingapore AVA. Ulwazi malunga nokubanjwa kwendlovu lwatshintshwa ngexesha leqela elikhethekileyo lophando (SIG).
NgoJanuwari-Juni 2016: Ukubuyela e-Afrika, abaphandi bafumana uqeqesho olukhethekileyo nguFreeland ukuze basebenzise ulwazi lwabo olutsha kwaye bahlalutye kwaye baphazamise imixokelelwane yokubonelela.
NgoJulayi-Septemba 2016 noJanuwari 2017: I-LATF ilungelelanise uphando oluhlanganyelweyo kunye neziphathamandla zezilwanyana zasendle, amapolisa kunye namagosa amasiko akhokelela ekubanjweni kwabarhanelwa abasi-8, abemi baseCongo eKinshasa, eCongo DR nasePointe Noire, eCongo Brazzaville abanoxanduva lokuhambisa ngokungekho mthethweni ama-3.9 iitoni zamabamba endlovu ukuya eThailand ngo-2015 naseVietnam ngo-2014.
1. Mnu. KAPAYI KIKUMBI JEAN- Ubunjineli bezoLimo kunye nohlalutyo lweMveliso kwi-Ofisi yoMphathiswa Wezolimo eKinshasa, eDRC.
2. UMnu ONAKOY OLEKO- Umhloli oPhezulu kwiZiko leMigangatho kunye neziQinisekiso zeCandelo loMphathiswa Wezorhwebo noshishino eKinshasa, eDRC
3. UMnu. Samba Marega osekupheleni kweminyaka engama-30 okwabizwa ngokuba ngu-DIT SEIDOU usomashishini ongumnini weBONCOIN DU MARCHE ePointe Noire, eCongo.
4. Mnu. BAKE LOULA oneminyaka engaphaya kwama-40 ubudala okwaziwa ngokuba ngu-SERAPHAN SAMRON wenkampani yeenqanawa ebizwa ngokuba yi-SAM-TRANSIST ePointe Noire
5. UMnu Roland Tchikaya - uMlawuli wezoLawulo waseNayile wasePointe Noire
6. UMnu Ngoula Gildas - uMphathi wezeMali noLuntu / uMlawuli obambeleyo ePointe Noire
7. Mnu. Kambala Mukenge - uMphathi oMkhulu woXwebhu kunye neeRekhodi kwi-OCC (kwiOfisi yeeRhafu
Ukulawula ukuthunyelwa kwelinye ilizwe) iDRC eKinshasa.
8. UMnu Laurent Emery Kabugah - uMphathi weNkampani yezoThutho ye-ACREP eKinshasa, eDRC.
Inkqubo zoncedo kwezomthetho ziye zaqaliswa phakathi kwamazwe achaphazelekayo ukuququzelela ukuqokelelwa kobungqina obubalulekileyo obuvela kwabasemagunyeni eThailand naseVietnam abathi bathimba ukuxhasa utshutshiso.
Nge-Okthobha-Disemba 2016: I-LATF kunye namazwe angamalungu ayo (kubandakanya iKenya neUganda) bayaqhubeka noqeqesho olwenziwa nguFreeland, behlalutya iziphumo zophando zakutshanje kunye nokuphonononga amanyathelo alandelayo okuphelisa intambo yokuthengisa ngokuthengisa izilwanyana zasendle phakathi kweMpuma neNtshona Afrika.
NgoFebruwari ka-2017: I-LATF iphinda yazibandakanya noogxa bayo baseAsia kwezomthetho eBangkok ukuqhuba uqeqesho ngokudibeneyo kunye nokutshintshiselana ngolwazi malunga nokuphazamisa ukuhamba ngokungekho mthethweni kwendlovu, izikali zepangolin kunye nophondo lwemikhombe ukusuka e-Afrika ukuya e-Asiya.
Nge-Matshi 2017: EAfrika, iFreeland ibonelela ngoqeqesho olukhethekileyo eKenya, eUganda, eTanzania, eGabon, eCongo (eBrazzaville) naseZambia ekufumaneni yonke imisesane yokurhweba ngabantu.
Epreli-Meyi 2017: eUganda naseKenya, i-LATF kunye namalungu ayo bachonga kwaye babamba amalungu asi-7 entengo engekho mthethweni ebotshelelwe ngo-Matshi 2014 ukubanjwa kwendlovu yase-Singapore kunye nezinye izinto ezithunyelwayo.
NgoJuni 2017: abarhanelwa aba-2 kubandakanya u-kingpin, uGakou Fodie wabanjiswa eMalaba, eKenya liqela elidibeneyo elilungelelaniswe yi-LATF. U-Gakou Fodie ugqithiselwe eTanzania apho azokuma khona.
EMombasa nge-24 ka-Epreli i-17 ye-LATF ikhokele kwaye i-Freeland yacebisa i-Kenya SIG enamagosa onyanzeliso kwezi arhente zilandelayo:
· ICandelo loPhando loLwaphulo-mthetho leNkonzo yesiPolisa yeSizwe
Umsebenzi weQela laseLusaka (LATF)
Inkonzo ye-Wildlife yaseKenya (KWS)
Igunya leZibuko laseKenya (KPA)
Nge-24 ka-Epreli 2017 SIG ibanjiwe eMombasa:
1. Igosa laseKra Mombasa -JAMES NJAGI, iirekhodi ezisemthethweni zibonisa ukuba uhlole ikhonteyina kwizibuko laseMombasa, waqinisekisa amaxwebhu okuhambisa kunye nekhonteyina ekhutshiweyo.
2. UJAMES ORECH -Ummi waseKenya, uPatana Clearing & Arhente yokuDlulisa kunye nomrhwebi
3. USILAS NDOLO KIMEU-Ummeli woMntu oCocayo oCwangciswe nguPATANA
4. Umntu wesi-4 (umqhubi) wesikhongozeli esithunyelwe kwilori ukusuka e-ICD ukuya kwizibuko laseMombasa (akubizwanga mali njengokunika ulwazi lwe-SIG kwabanye abarhanelwa)
Zonke iifowuni zathathwa kwaye zahlalutywa. Bobathathu abarhanelwa bavela enkundleni eShanzu, eMombasa nge-3 ka-Epreli 25. Ibheyile yemali eyi-Ksh2017Million umntu ngamnye kunye nesiqinisekiso esifanayo.
Nge-5 kaMeyi, i-2017 SIG ibanjiwe eMalaba, ukuwela umda e-Uganda naseKenya:
UJUMBAH AMAHENO GAYLORD -ququzelele kwaye wajonga ikhonteyina ukusuka eMalaba ukuya kwizibuko laseMombasa. U-GAYLORD ulungiselele isikhongozeli ukuba "sidlule" kwinkqubo yokuvavanywa kwempahla eKenya ukuya kulayishwa kwinqanawa emiselwe eSingapore. Ifowuni ephathekayo ibanjiwe kwaye iya kuhlaziywa. Ubungqina bubonisa ukuba uthumele imali amaxesha ama-3 kwiveki e-1 ewonke ngaphezulu kwe-Ksh300000 kuGaylord. Wayegcinwe eMombasa phantsi kwamapolisa ukuba amse enkundleni ngoMeyi 8, 2017.
Ngomhla we-27 kaMeyi 2017 eMalaba:
UJUSTUS WESONGA owaququzelela kwaye wahlengahlengisa le ndlovu kwizikhongozeli eKampala, eUganda, kubandakanya nokuhamba kwayo ukuya kumda weMalaba, wabanjwa nge-27 kaMeyi 2017 eMalaba. Wabanjwa eMalaba kwangolo suku yayinguJustus Ogema Owade. Bobabini abarhanelwa basiwa eMombasa apho bavalelwa khona kwizisele zamapolisa. Emva kodliwanondlebe, u-Ogema wakhululwa ngenxa yokungabikho kobungqina obaneleyo emva kokurekhoda ingxelo, lo gama uWesonga wasiwa enkundleni ngomhla we-29 kaMeyi ka-2017. U-Owade uyakusetyenziswa njengengqina lomtshutshisi.
EFreeland ngumbutho ophambili wokurhweba ngabantu ngokurhweba usebenzela ilizwe elingenakho ukurhweba ngabantu ngokungekho mthethweni kunye nobukhoboka babantu. Iqela lethu lokunyanzeliswa komthetho, uphuhliso kunye neengcali zonxibelelwano zisebenza kunye namaqabane e-Asia, e-Afrika naseMelika ukukhusela indalo kunye nabantu abasemngciphekweni kulwaphulo-mthetho oluhlelelekileyo nenkohliso. Ngolwazi oluthe kratya, ndwendwela www.freeland.org
Umsebenzi weSivumelwano soMsebenzi weSivumelwano ngumbutho ophakathi koorhulumente wase-Afrika oququzelela imisebenzi yobambiswano / phakathi kwamaqela eQela kwiSivumelwano saseLusaka, ekwenzeni uphando malunga nokwaphulwa kwemithetho yesizwe ephathelene norhwebo olungekho mthethweni kwizilwanyana zasendle nakwizityalo. www.lusakaagreement.org